NA-ARỤ ỌRỤ NA ỤLỌ AKWỤKWỌ NA PHOTOSHOP - PHOTOSHOP - 2019
Na ndabara, ngwanrọ niile maka kalịnda vidio Nvidia na-abịa site na ntọala ndị na-egosi ogo foto kachasị elu na ntinye nke mmetụta nile GPU a na-akwado. Ụkpụrụ dị otú ahụ dị elu na-enye anyị ihe oyiyi mara mma na nke mara mma, ma n'otu oge ahụ belata arụmọrụ zuru ezu. Maka egwuregwu ebe mmeghachi omume na ọsọ adịghị mkpa, ntọala ndị dị otú ahụ ga-adaba n'ụzọ zuru oke, mana maka agha netwọk na ọnọdụ ndị dị egwu, ọnụ ọgụgụ dị elu dị elu dị mkpa karịa ala mara mma.
N'isiokwu a, anyị ga-anwa ịmepụta kaadị vidiyo Nvidia n'ụzọ dị otú ahụ iji gbanye FPS kachasị elu, ebe ọ na-efu obere.
Nvidia kaadị ntọala kaadị
Enwere ụzọ abụọ ị ga-esi hazie ọkwọ ụgbọala vidiyo Nvidia: aka ma ọ bụ na-akpaghị aka. Ntughari ntinye edezi gụnyere ezigbo nhazi nke njedebe, na akpaka wepụ mkpa ọ dị 'tinker' na ọkwọ ụgbọ ala ma na-azọpụta oge.
Usoro 1: Ntọala Ntuziaka
Iji aka na-edozi njedebe nke kaadị vidiyo, anyị ga-eji ngwanrọ arụnyere na ọkwọ ụgbọala ahụ. A na-akpọ Software naanị: "Ogwe njikwa Nvidia". Ị nwere ike ịnweta panel site na desktọọpụ site na ịpị ya na RMB ma na-ahọrọ ihe dị mkpa na menu ihe.
Mbụ anyị na-ahụ ihe ahụ "Ịmezi ntọala oyiyi na ilele".
N'ebe a anyị na-agbanye gaa na ọnọdụ ahụ "Dị ka ngwa 3D" ma pịgharịa bọtịnụ ahụ "Tinye". Site na nke a, anyị na-agụnye ike ịchịkwa àgwà na arụmọrụ kpọmkwem site na mmemme ahụ na-eji kaadị vidiyo na oge enyere.
Ugbu a, ị nwere ike ịga na ntọala zuru ụwa ọnụ. Iji mee nke a, gaa na mpaghara "Jikwaa Ntọala 3D".
Tab "Nhọrọ ụwa" anyị na-ahụ ndepụta ogologo nke ntọala. Anyị ga-ekwu banyere ha n'ụzọ zuru ezu.
"Nchịkọta anisotropic" na-enye gị ohere imeziwanye ịdị mma nke ịbịaru textures dị iche iche ma ọ bụ dị na nnukwu n'akuku nke onye na-ekiri ya. Ebe ọ bụ na anyị enweghị mmasị na "ịma mma", AF gbanyụọ (apụ). A na-eme nke a site na ịhọrọ uru bara uru na listi ndọpụta na-abụghị nke dị na kọlụm aka nri.
"CUDA" - Nvidia pụrụ iche, nke na-enye ohere iji ihe nkiri ndị na-ese ihe na nyocha. Nke a na-enyere aka iwelie ikike njikwa atụmatụ nke usoro. Maka oke a, setịpụ uru "Ihe niile".
"Mmekọrịta V" ma ọ bụ "Mmekọrịta anya" na-enye gị ohere ihichapụ ọdịiche na ịmegharị onyinyo ahụ, na-eme ka foto ahụ dịkwuo mma, ebe ị na-ebelata ọnụ ọgụgụ nke ọnụ ọgụgụ (FPS). Nke a bụ nhọrọ nke gị, dịka nke gụnyere "Mmekọrịta V" nke nta na-ebelata ọrụ ma nwee ike ịhapụ.
"Dimming ìhè ndabere" na-enye ihe nkiri ndị ọzọ, na-ebelata ihe na-egbuke egbuke nke ihe ndị onyinyo dara. N'ọnọdụ anyị, a nwere ike gbanyụọ oke a, ebe ọ bụ na iji nnukwu egwuregwu nke egwuregwu anyị agaghị achọpụta mmetụta a.
"Uru kachasị elu nke ndị ọrụ a zụrụ azụ". Nhọrọ a "ike" onye nhazi ahụ iji tụọ ọtụtụ okpokoro tupu oge eruo na kaadị vidiyo adịghị na ala na-abaghị uru. Site na onye na-adịghị ike nhazi, ọ ka mma ịdọrọ uru gaa 1, ọ bụrụ na CPU dị ike, ọ na-atụ aro ka ịhọrọ ọnụọgụgụ 3. Nke dị elu karịa uru, obere oge GPU "echere" maka okpokolo agba ya.
"Ọdịdị Ntucha" chọpụta ọnụ ọgụgụ nke ndị na-emepụta ihe nkiri ndị egwuregwu ahụ ji. Ebe anyị na-ahapụ ndabara (Nchekwa onwe).
Na-esote, ị kwesịrị ị gbanyụọ njedebe anọ ahụ bụ ndị na-ebu maka nkwụsị: Gamma Correction, Ngalaba, Nghọta, na ọnọdụ.
"Ịgba Ụta Atọ" naanị na-arụ ọrụ mgbe enyereere gị aka "Mmekọrịta anya", dịkwuo mma ịrụ ọrụ, mana ịbawanye ibu na ibe nchekwa. Gbanyụọ ma ọ bụrụ na ị naghị eji ya "Mmekọrịta V".
Ntọala ọzọ bụ "Ntụkọta ederede - Nlekọta Nlereanya nke Anisotropic" na-enye ohere, na-ebelata ikikere nke foto a, iji mụbaa arụpụtaghị ihe. Kwado ma ọ bụ mee ka nhọrọ ahụ, kpebie n'onwe gị. Ọ bụrụ na mgbaru ọsọ kachasị FPS, họrọzie uru ahụ "Na".
Mgbe ịmechara ntọala niile, pịa bọtịnụ ahụ. "Tinye". Ugbu a, a ga-agafe ihe ndị a n'ụwa niile na usoro ọ bụla (egwuregwu). Iji mee nke a, gaa na taabụ "Ntọala Software" ma họrọ ngwa achọrọ na listi ndọpụta (1).
Ọ bụrụ na egwu ahụ adịghị, wee pịa bọtịnụ ahụ. "Tinye" ma chọọ faịlụ a na-arụ ọrụ na diski, dịka ọmụmaatụ, "worldoftanks.exe". A ga-atụba egwuri egwu ahụ na ndepụta ma maka ya anyị na-etinye ntọala niile na ọnọdụ ahụ "Jiri nhazi ụwa". Echefula ka ịpị bọtịnụ ahụ "Tinye".
Dị ka ihe ndị e kwuru si kwuo, ụzọ a nwere ike imeziwanye arụmọrụ na egwuregwu ụfọdụ ruo 30%.
Usoro 2: Ntọala na akpaaka
A na-emegharị ntaneti nke vidio vidio Nvidia maka ihe egwuregwu na ngwanrọ, wee nye ndị ọkwọ ụgbọala kachasị ọhụrụ. A kpọrọ ya Nvidia GeForce Ahụmahụ. Usoro a dị naanị ma ọ bụrụ na ijiri egwuregwu ikikere. Maka "omere ome" na "repack" ọrụ anaghị arụ ọrụ.
Ị nwere ike ịme ihe omume ahụ Ogwe usoro Windowssite na ịpị akara ngosi ya PKM na ịhọrọ ihe kwesịrị ekwesị na menu nke meghere.
Mgbe ihe ndị a dị n'elu, windo ga-emepe na nhazi niile. Anyị nwere mmasị na taabụ ahụ "Egwuregwu". Ka usoro ahụ wee chọta ihe niile anyị ji egwuri egwu nke a ga-ahazi, ị kwesịrị ịpị akara ngosi mmelite ahụ.
Na listi e kere eke, ịkwesịrị ịhọrọ egwuregwu ahụ anyị chọrọ imeghe na-akpaghị aka na-ahazi parameters ma pịa bọtịnụ. "Na - ebuli", mgbe nke a ga-agba ọsọ.
Mgbe anyị mere omume ndị a na Nvidia GeForce Experience, anyị na-agwa onye ọkpụkpọ vidiyo nke kachasị ntọala kwesịrị ekwesị maka otu egwuregwu.
Ndị a bụ ụzọ abụọ iji hazie ntọala maka kaadị vidiyo Nvidia maka egwuregwu. NDỤMỌDỤ: Gbalịa iji ihe ndị ikikere iji zọpụta onwe gị site n'inwe iji aka hazie ọkpụkpọ vidiyo, ebe enwere ike ịmehie, ịnataghị kpọmkwem ihe ọ bụla achọrọ.